Qaramada midoobey oo bogaadisey tallaabo uu qaaday madaxweyne Farmaajo.
January 31, 2021 Xuseen 1
Puntlandtimes (Muqdisho)-War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska siyaasadda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay go’aankii madaxweynaha Soomaaliya iyo shirka uu ku baaqay ee dhowaan ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb.
Qoraalka oo la soo la soo dhigay barta Twitterka ee xafiiska UNSOM ayaa waxaa lagu sheegay in qaramada Midoobay ay boggaadineyso go’aankaasi, islamarkaana ay soo dhoweyneyso shirweynaha 1-da illaa 3-da bisha soo socota ka dhacaya Galmudug.
Dhanka kalena, xafiiska siyaasadda qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday madaxda Soomaaliyeed inay la yimaadaan is-faham iyo isu-tanaasul, si xal mideysan looga gaaro doorashooyinka.
“Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya waxay soo dhoweynyaa go’aankii madaxweyne Farmaajo ee ahaa iclaaminta shirka Dhuusamareeb, madaxda Soomaalida waxaan ku boorineynaa in ay la yimaadaan is faham iyo isutanaasul si deg deg loogu dhaqan geliyo heshiiskii 17 ee doorashada ku saabsanaa,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Maanshallah. Ogaada qofkasta oo wanaag ka shaynaya. Xaasid baa daba taagan oo xumaanka sheegay. Nebiga CSW waxaa dhibay oo xaasiday adeerkii Abi lahab. Markaa hala yaabina kuwani beenta iyo ceeb uusan lahayn ka sheegay madaxwayne Farmaajo